Oppo A93 5G bụ ntinye ọhụụ ọhụrụ na Snapdragon 480 na 90 Hz panel | Gam akporosis
Oppo A93 5G bụ ntinye ọhụụ ọhụrụ na ngalaba Snapdragon 480 na 90 Hz
Onyeka Onwenu | | Mobiles
Onye na-emepụta Asia bụ Oppo ekwuputala ihe bụ otu n'ime smartphones mbụ ya na nhazi ntinye 5G iji ruo ọha na eze. Oppo A93 5G bụ nke mbụ n’ime ekwentị iji rute ya na ihe mgbakwunye Snapdragon 480 ma nye ya njikọta data dị elu.
Ewezuga CPU ahụ ekwuru na ọ bụ ezigbo ezigbo ọnụ, Ram ole na ole, ihe nchekwa nchekwa, ọ na-ekwe nkwa ọmarịcha arụmọrụ. Nkọwa ọzọ bụ na ọ na-abịa na ụdị ọhụrụ nke gam akporo ma na-ekwe nkwa mmelite mgbe e mesịrị, dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
1 Oppo A93 5G, ntinye ntinye na-adọrọ mmasị
2 Batrị ga-adịgide ụbọchị niile
3 Njikọta na sistemụ arụmọrụ
Oppo A93 5G, ntinye ntinye na-adọrọ mmasị
Oppo A93 5G na-akwụ ụgwọ na ọkwa 6,5-inch IPS LCD (LTPS) nke nwere mkpebi nke 90 Hz, nzaghachi a na-ahụ anya bụ 180 Hz. Iji nye ya nkọwa ndị ọzọ dịka na ọ bụ panel nwere mkpebi Full HD + (2.400 x 1.080 pikselụ), nha nke 20: 9 na 405 dpi.
Ugwu ihe nhazi Snapdragon 480 na-enye gị njikọ 5G / 4G, ihe eserese eserese bụ Adreno 619 nke na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na ngwa yana ọbụlagodi etiti. Nchekwa ahụ bụ 128/256 GB na ohere nke ịgbasa ya na ọtụtụ gigabytes na RAM bụ 8 GB.
Na azụ ọ na-egosi lenses atọ, nke mbụ bụ megapix 48, nke abụọ bụ 2 megapixel nnukwu na nke atọ bụ nke eserese, ụdị a enweghị oke obosara. N'ihu na-egosi oghere a gbapuru maka igwefoto dị n'ihu, ọ bụ naanị 8 megapixels ma nwee oke zuru oke iji jide foto dị mma, vidiyo na adabara maka nzukọ ọgbakọ vidiyo.
Batrị ga-adịgide ụbọchị niile
Onye nrụpụta ahụ rụtụrụ aka na batrị 5.000 mAh ga-enye ya nnwere onwe dị ogologo iji mee ihe karịrị otu ụbọchị zuru ezu na-enweghị mkpa ka ị tinye ya na ya, CPU niile na-eme ka ọ dị mma. Nchaji bụ ngwa ngwa na 18W na anyị nwere ike ikwu na ngwaọrụ na nanị otu awa na nkeji iri abụọ site 0 ka 100%.
Otu nkọwa dị mkpa bụ na chaja nke ọ ga-abịarute ga-ezuru ya iji kwado ya, ọ bụ ụdị USB-C ma ọ ga-abata dị ka akụkụ nke enwere ike dochie ya. Oppo A93 5G bụ mmalite OPPO A72, ma jiri obere arụmọrụ nke na-enye gị ohere iweta ụgwọ dị ala.
Njikọta na sistemụ arụmọrụ
El Oppo A93 5G rutere na njikọta 5G Dị ka ihe kwesịrị ịrịba ama, mana ọ kwụsịghị ebe a, ịnwere ike ijikọ na netwọkụ 4G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, USB-C maka ịgba ụgwọ na mini-jack maka ekweisi. Ekwentị agbachi na ngwa ngwa ngwa na configurable n'akụkụ mkpisiaka ozugbo ịmalitere ọnụ site na igbe, n'ihi na nke a, anyị ga-ahapụ a mkpịsị aka enwe.
Na ngwanrọ a ga-emelite ya na gam akporo 11 dị ka nwelite ikpeazụ na nke dị mkpa, na-abịarute na ngwugwu dum nke ndozi na ruo ọnwa nke Jenụwarị. Ngwurugwu omenala bụ ColorOS 11.1, nke na-enye ihe karịrị atụmatụ 10 ọhụrụ, otu n'ime ha nwere ike ịkwalite ekwentị n'oge ọ bụla.
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD nwere mkpebi HD zuru ezu (2.400 x 1.080 pikselụ) / Ume ume: 90 Hz / 20: 9/405 dpi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 480
Ohere TERLỌ N'IME 128/256 GB / O nwere oghere MicroSD
GHARA CAMERAS 48 MP Isi ihe mmetụta / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Portrait Sensor
N'ihu CAMERA 8 MP isi ihe mmetụta
UMUAKA 5.000 mAh na 18W ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 na ColorOS 11.1
Njikọ 5G / Wi-Fi 802.11 ac / Bluetooth 5.1 / GPS / Dual SIM / USB-C / Obere Jack
Atụmatụ ndị ọzọ Akụkụ mkpisiaka agụ
Mkpụrụ na arọ: 162.9 x 74.7 x 8.4 mm / 188 gram
El Oppo A93 5G kụrụ na ahịa China na mbido, ebe ọ ga-ekwe omume idobe ya maka ọnụahịa nke 1.999 yuan maka ụdị 8/256 GB, ebe a ga-ekpebi ụdị 8/128 Gb. Ọ na-abịa na-acha anụnụ anụnụ, na-acha ọcha na oji na agba. Ofbọchị amata na mba ndị ọzọ amaghi n'oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Oppo A93 5G bụ ntinye ọhụụ ọhụrụ na ngalaba Snapdragon 480 na 90 Hz
Samsung kwenyesiri ike na S Pen ga-erukwu ngwaọrụ Galaxy
Otu esi enyere mkparịta ụka na ozi na-apụ n'anya na Mgbama